ဒီတဗတ်မတ်စေ့ notes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဒီတဗတ်မတ်စေ့ notes
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 9, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 13 comments
မြစ်ဆုံနှင့်လက်ပံတောင်း စီမံကိန်းများ ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မဟုတ်တရုတ် သံအမတ် ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ်မှ အချိန်နဲနဲပေး ပေးစေလိုဂျောင်း၊ သေသွားသော အဘိုး၊ ပက်လက်မျော အဖေနှင့် ဂိလာန သားတို့ကိုကြည့် ဆိတ်လိုက်မာန်ပါ ဆုံးဖြတ်ခြင်းထက် အကောင်းပတိ ရှိနေသေးသည့် မြေးငယ်လေး သူတို့လက် ဝကွက်အပ် အကဲဖြတ်ပါဟု တိုက်တွန်းသွားသည်။
စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှ တင်ပြသည့် မီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းကို အချိန်ကြန့်ကြာသွားနိုင်၍ လက်မခံဂျောင်း၊ မိမိတို့ တိုင်းပြည်အာဏာကို နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော် မလွှဲမရှောင်သာ ယူခဲ့ရ၍ ထပ်မံ အချိန်ဆွဲသည်ဟု အပြောမခံ လိုဒေါ့ဂျောင်း ပျံကျားရေးဝံကျီး ဦးပလီစိချောက်ချက်မှ ပြောသည်။
အမည်မသိ အစွန်းရောက် ၇၈၆များ၏ ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေသူ အယာတိုလာ မာမွတ် လျှာပွတ် ခိုမ်မေနီအား သည်းမခံနိုင်တော့၍ ဂေဇက်ရွာထိပ် ညောင်ညိုပင်အောက်တွင် သာမီးဒေါ်ဂါလေးနှင့် ၉၆၉ ကြောင်ကြီး လမ်းခွဲဂျဂျောင်း ဂေဇက်အမြန်လမ်း စီမံကိန်း လမ်းအူကြောင်း ဖောက်လုပ်သူများမှ ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်သီးဝလံများကို စင်ကာပူမှ လုပ်ငန်းရှင်များ ဆိတ်ဝင်စားလျက်ရှိရာ ဂွေးသီးသင်္ဘောတစင်းစာ သီဟပူရဆွိမမ ကုမ္မဏီမှ ဝယ်မည့်သတင်းအား ကုမ္မဏီသူဌေးမ ချောင်ဇဉ်ဝါးမှ ဒေါသတဂျီး ပယ်ချလိုက်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် ကာနီဘို မိတ်ကပ်တွင် ရွှံ့များပါဝင်နေ၍ ဈေးကွက်မှ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းနေမှုအပေါ် မြန်မာ သနပ်ခါး လုပ်ငန်းရှင်များမှ စာနာမိကျောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့လိုက်သည်။
မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ပထမဆုံး ဖြန့်ချီရောင်းချသော အက်ခ်ဇွန်မိုဘိုင်းလ် စက်ဆီ၊ ချောဆီအား အိပ်ယာထဲ ယူသုံးမိသော နှစ်ဖက်ချွန် ဂျော်လကီအောင်ပု မောမောနှင့် ဆေးလိပ်မီးညှိစဉ် ဟုန်းခနဲ မီးလောင်၍ မီးသွေးခဲ ဖြစ်သွားသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရား လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ ငါးနှစ်ဆက်တိုက် မြင့်တက်လာသော်လဲ တရုတ်ဧည့်အဝင် နဲသွားဂျင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရတာအကုန်သယ် မဟုတ်တရုတ် အကုန်ရောင်းသူ ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ် မွတ်ဆလင်ဘာသာ ပြောင်းသွား၍ဟု ၎င်းထံ ဝက်ကလီစာ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရောင်းချပေးခဲ့သူ ဈေးသည်ဂျီး ကပေထံမှ လက်ထောက်ချသည်။
မြန်မာရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုများတွင် အသက်အရွယ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေရာ သတင်းဂျာနယ်များကိုလည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်သွားရန် စိုင်းပြင်းနေပြီး ကနဦး ကြိုးပမ်းချက်အဖြစ် ဂေဇက်အွန်လိုင်းတွင် အယာတိုလာ ခိုမ်မေနီအမည်ဖြင့် ရေးသောစာအား X-80 အသက်၈၀ ဖတ်ရှုခွင့်မပြုရန် စီစဉ်ထားသည်။
အိမ်မွေး ဆိတ်မဂျီးအား အလိုမတူ သားမယား ပြုကျင့်မှု အစွပ်စွဲခံရသည့် ဂေဇက်ရွာသဂျီး ရှာပွတ်ခိုမ်က နာမည်ကြည့် မပြောစေလိုဂျောင်း၊ သူ့အနေနှင့် လူလူဂျင်းပင် ထိုစိတ်မရှိဒါ ကြာပီဖစ်ကြောင်း ဝန်ခံသွားသည်။
မိမိအရေးထက် တိုင်းပြည်အရေး ဦးစားပေးရန် လွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာသည့် တောင်တွင်းကြီး အန်အယ်လ်ဒီများအား ဘွားဒေါ်ဂျီးမှ ပြောပြီးနောက် ဒေါ်လာဖြင့် ပေးဝယ် တင်သွင်းရသည့် စက်သုံးဆီများ မပြုန်းတီးစေရန် လမ်းလျှောက် အိမ်ပြန်ဂျဂျောင်း သတင်းထုတ်ပျံသည်။
နာ့ ကို ဘာလို့ အဲ့ဒီ အသီး မရောင်းရတာတုန်းးးးး
ဒီမှာ ကိုလက်စထရောကျတယ် ဆိုပြီး:::::
ဒီ အသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်ကို ၃ ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ်သောက်နေကြလို့ စီးပွါးရေးသောင်းကျန်းမို့ကို။
မီဒီယာမှာ သဘောတူဝူးပြောပီး… ကျိတ်ဝယ်ဂျမှ ဇေးဂွက်မှာ ပိုနာမယ်ကြီးပီး ရောင်းရမှာလေ…
သီဟပူရသွားလည်မည့် ကိုကိုများ သတိကြီးကြီးထားကြပါ…
ဆွိမမက ကိုလက်စထရောကျတယ် ဆိုပြီးအလိုရှိနေလို့…
ဪ… လက်ဆောင်ဝယ်သွားပေးဖို့ ပြောဒါပါဗျ…
စိုက်ခင်းသိသူများ ညွှန်လိုက်ကြပါဗျို့… ဟီ ဟိ
(အဲလေ) လာမှတော့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့ ပြောတာ။
ဒီဖျော်ရည်သောက် ကိုလက်စထရောကျတယ်ဆိုလို့ ဝယ်သောက်ကြည့်တာ။ အဲ အသီးဖျော်ရည်။
ချက်ချင်းကို မှောင်မှောင်သည်တွေကို ဓားမြတိုက်ဖို့ အကြံရတယ်။ ငိငိငိ
အဲ့ဒီ အသီးရှား ဟီးးး
အနော်ကတော့ ကာနီဗို ကရွံနဲ့ပဲ ထုတ်ထုတ် .. ဗွက်နဲ့ပဲ ထုတ်ထုတ် ကြိုက်ပြီးသားဗျ ….
မြန်မာက ပြောရတေးတယ် … ဂျပန် သနပ်ခါးမှာ ရွံပါကြောင်း …
ဟိုတစ်ခါကကျ ရွှံ့က ဘာကောင်းသလေး ညာကောင်းသလေး နဲ့
ဘယ်ရို ဒဒင်းတွေရဲ…ဂျ ။
ဂွေးသီး သင်းဘောတစင်းစာ ကိစ္စတော့ စိတ်ဝင်ဇားတယ်ဗျို့ …
လက်ရှိ မှော်ဘီမှာ ဂွေးခြံရှိတယ် … ဘိဇနပ် ဒူးလိုသူများ ဆက်သွယ်ကြပါကုန် … ။
မှော်ဘီ-တိုက်ကြီး ကားလမ်းကနေ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၂မိုင်မှာ … ဂွေးကုန်းရွာ ရှိပါတယ်။
အဲ့မှာ မရမ်းပင်၊ ဂွေးပင် အလွန်ပေါ … အိတ်စပို့ ဆိုဒ် လိုသလောက် ရနိူင်ကြောင်း …။
ွှအဲ့ရွာက ဆြာတော်တောင် အစွဲပါပီး ဂွေးသီးကုန်းဆရာတော်ဆိုပီး နာမည်ကြီးလေရဲ့
အဲဒီဘာသာထဲက ဆုံးမစာတစ်ခုကတော့ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူများအတွက် မှတ်သားစရာပေပဲကလား
ဘာတဲ့တုန်းဆိုတော့ … ယောက်ျား ကြီးငယ် မရွေး မာစတာဗေးရှင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့
အရမ်းအဖိုးတန်တဲ့ သုတ်ရည်ကို အလကားစွန့် ပစ် ရင် အပြစ်ကြီးစွာရမယ် ဆိုပဲ
စိတ်မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ၊ လူသို့ မဟုတ် တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကောင်နဲ့ ကရိုင်းရမယ် တဲ့
မှတ်သားစရာ … မှတ်သားစရာ
တကယ်လားဗျ ကိုပေ။ အမယ်မင်း ကျောင်းဆရာဂျီးပါလား။ ဒါမျိုးကျရင် ဘယ်သူမှ အသံမထွက်လို့ ကျနော်က ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဝင်ပြောလိုက်အုံးမယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ တန်ရာတန်ရာပဲ ရမယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်အဆင့် ရှိသလောက်ပဲ ကိုယ်နဲ့တန်တာကို တီထွင်ထားတယ် တူနယ် တူနယ်။
နောက်အပတ် ငါးမူးစေ့ လာမယ်ထင်တယ်။
ဦးကြောင် လက်ချက်နဲ့ သူဂျီးတော့ ဖွတ်ဖွတ် ညက်ညက်ကျေနေပီ…
ရ စရာကို ရှိတော့ဝူး… အော် ပြောချင်သလိုပြော နာတို့ သူဂျီးက တော့ အေးချေး အေးချေး..